Uyifaka njani iArduino IDE kwiinguqulelo zamva nje zeBuntu | Ubunlog
Iprojekthi yeArduino yiprojekthi yeHardware yasimahla efuna ukuzisa iibhodi ze-elektroniki kufutshane nomsebenzisi wokugqibela ngexabiso elincinci kwaye unakho ukubanakho ukuphindwaphindwa kwaye uguqulwe ngaphandle kokuhlawula iphepha-mvume okanye ilungelo lokushicilela. Kwakhona, njengeSoftware yasimahla, Uyilo lweProjekthi yeArduino lunokuhambelana nalo naluphi na uhlobo lweSoftware yasimahla kunye neHardware.
Uyilo lweemodeli ezahlukeneyo zeebhodi zifunyenwe kwiwebhusayithi esemthethweni yeprojekthi kunye nokubanakho kokuthenga iibhodi kwabo bangafuniyo ukuyenza, kodwa asizukufuna kuphela ibhodi yeprojekthi yethu ukusebenza okanye ukwenza iArduino ukuba ibe nengqondo, Siya kufuna kwakhona isoftware, isoftware esinokuthi siyenze noBuntu bethu. Le software ayinakwenziwa ngomhleli wekhowudi olula kodwa kuya kufuneka sibe nenkqubo ebizwa ngokuba yiArduino IDE.
1 Yintoni iArduino IDE?
2 Uyifaka njani i-Arduino IDE kwi-Ubuntu?
3 Yintoni endiyifunayo ukusebenza neArduino IDE?
4 Kwaye ukuba andinayo ikhompyuter yam, ndingayisebenzisa njani iArduino IDE ngaphandle koBuntu bam?
5 Ngaba ndingatsiba onke la manyathelo?
Yintoni iArduino IDE?
I-ID yeArduino sisicwangciso senkqubo yokuba abo banoxanduva lweProjekthi yeArduino bayile ukwazisa isoftware kwiibhodi zeArduino. I-Arduino IDE ayisiyiyo umhleli wekhowudi kuphela kodwa ine-debugger kunye nomhlanganisi osivumela ukuba senze inkqubo yokugqibela kwaye siyithumele kwimemori yebhodi ye-Arduino..
Le yokugqibela inokuba yeyona nto inomdla kakhulu okanye ibalulekileyo ye-Arduino IDE kuba zininzi ii-IDE zasimahla ku-Ubuntu, kodwa akukho namnye kubo onika unxibelelwano kwiimodeli zebhodi yaseArduino.
Iinguqulelo zamva nje ze-Arduino IDE ayenzanga kuphela ukuba le nkqubo ihambelane ngakumbi neemodeli ezintsha zeProjekthi, kodwa ikwaphucule nemisebenzi ye-IDE, ivumela nokuba nokuba ujongano lwamafu olusivumela ukuba senze inkqubo yeArduino naphina emhlabeni (ubuncinci apho kukho unxibelelwano lwe-intanethi). Kwaye ayisiyiyo kuphela i-Arduino IDE yasimahla kwindawo yejografi, kodwa isimahla ngaphakathi kwendawo yekhompyuter kuba i-Arduino IDE ixhasa unxibelelwano nazo zonke iintlobo zeenkqubo, kubandakanya abahleli beekhowudi abaza kuqhuba umsebenzi kunye nezixhobo zeArduino. Nangona kunjalo, iArduino IDE ikwayiSoftware yasimahla.
Uyifaka njani i-Arduino IDE kwi-Ubuntu?
I-Arduino IDE ayikho kwiindawo zokugcina ezisemthethweni ze-Ubuntu, ubuncinci inguqulelo yamvanje, ke Kuya kufuneka sisebenzise iwebhusayithi esemthethweni yeProjekthi ukufumana le IDE. Kukho iinguqulelo ezimbini zeArduino IDE, Inguqulelo ehambelana nesebe le-1.8.x kunye nelinye isebe elihambelana nohlobo lwe-1.0.x. Umahluko phakathi kweenguqulelo zombini ulele kwiimodeli zepleyiti abazixhasayo. Ngokwam ndicinga ukuba olona khetho lufanelekileyo kukukhuphela isebe le-1.8.x le-Arduino IDE. Kungenxa yokuba singatshintsha ibhodi ngalo naliphi na ixesha kwaye le nguqulo iya kuyixhasa, kodwa ukuba sikhetha uhlobo kwisebe elinye, kuya kufuneka siyitshintshe inkqubo ukuba sitshintshela kwibhodi yanamhlanje, kuba isebe le-1.0.6 lenza njalo ayixhasi iibhodi zeArduino zangoku.
Nje ukuba sikhuphele iphakheji ye-Arduino IDE ukusuka apha, siyicombulula kwifayile ecinezelweyo nakweyiphi na ifolda yekhaya lethu (kungcono ukuyenza eKhaya hayi kwiZikhuphelo ukuthintela iingxaki xa sicoca kwixesha elizayo).
Kwiphakeji esiyikhuphileyo, iifayile ezininzi kunye nezinto ezimbini ezenziwayo ziya kuvela, enye yazo ibizwa ngokuba yiArduino-Builder, kodwa ezi fayile zinokuphunyezwa azizukufuneka ukufaka iArduino IDE kwiBuntu. Ukuba sifuna ukuvula i-terminal kwifolda apho zikhona zonke ezi fayile. Nje ukuba sibe noku, kwisiphelo sendlela sibhala oku kulandelayo:
Lo myalelo uza kwenza ukuba ufakelo lwefayile luqhubeke ngaphandle kokuba yingcambu. Ngoku senza oku kulandelayo kwisiphelo sendlela:
Oku kuyakuqala ukufakelwa kwe-IDE ye-Arduino kwi-Ubuntu bethu. Emva kokuthobela imiyalelo yomncedisi kunye nokulinda imizuzwana emininzi (okanye imizuzu, kuxhomekeke kwikhompyuter). Yiyo ke loo nto, siya kuba ne-Arduino IDE efakwe ku-Ubuntu kunye nendlela emfutshane emfutshane kwidesktop yethu. Kule meko Ayinamsebenzi ukuba loluphi uhlobo loBuntu esinalo kuba lusebenza neenguqulelo ezili-10 zokugqibela ze-Ubuntu ezikhutshiweyo (Iinguqulelo zeLTS zibandakanyiwe).
Yintoni endiyifunayo ukusebenza neArduino IDE?
Zonke ezi zinto zingasentla ziya kusinceda ukuba sifake i-Arduino IDE ku-Ubuntu kodwa kuyinyani ukuba ayizokwanela ukuba ibhodi yethu yeArduino isebenze ngokuchanekileyo okanye ngendlela ebesingathanda ngayo. Ngoku, inkqubo ye-Arduino IDE isengumhleli wekhowudi olula njengeGedit. Kodwa inokulungiswa. Yenzelwe yona Siza kufuna intambo ye-usb yomshicileli, intambo yamandla ye-5V kunye nebhodi yophuhliso.
Sidibanisa yonke into kwaye ngoku ukusuka kwiArduino IDE esiya kuyo Izixhobo nakwiPlate sikhetha imodeli esiza kuyisebenzisa, Sikhetha izibuko esiza kunxibelelana ngalo nepaneli emva koko sikhethe ukhetho "Fumana ulwazi kwibhodi" ukuqinisekisa ukuba sinxibelelana ngokuchanekileyo nesixhobo.
Ngoku sibhala inkqubo kwaye xa sigqiba, siya kwimenyu yeNkqubo. Kuyo kufuneka kuqala Jonga / uqokelele kwaye ukuba ayikhuphi nayiphi na ingxaki emva koko sinokusebenzisa uKhetho lokulayisha.
Kwaye ukuba andinayo ikhompyuter yam, ndingayisebenzisa njani iArduino IDE ngaphandle koBuntu bam?
Kwimeko apho asinabo uBuntu bethu okanye sifuna ukwenza inkqubo yebhodi kodwa asifuni ukuphinda konke oku kungentla, kuya kufuneka siye le webhu esisinika uguqulelo lwe-Arduino IDE ngokupheleleyo kwilifu. Esi sixhobo sibizwa ngokuba yiArduino Yenza.
Le nguqulo isivumela ukuba senze yonke into ngokufanayo nenguqulelo yokugqibela yeArduino IDE kodwa iinkqubo kunye neekhowudi esizenzileyo zingagcinwa kwisithuba sewebhu Esabelwe yona kwaye sikwazi nokukhuphela ukuba sizisebenzise kuyo nayiphi na iprojekthi esiyenzayo kwiArduino IDE.
Ngaba ndingatsiba onke la manyathelo?
Ukuze usebenze ngokufanelekileyo ibhodi yeArduino, inyani kukuba asinakho ukutsiba nawaphi na amanyathelo angaphambili, kodwa hayi kuba iArduino IDE isebenza njengeMicrosoft Word okanye iAdobe Acrobat kodwa ngenxa ye Inyaniso elula yokuba ayikho enye into elungileyo. Eyona nto, ukuqhuba isoftware yethu okanye inkqubo kwiibhodi zethu, Okokuqala sifuna i-IDE ukwenza inkqubo. Ngale nto kuya kwanela nge I-Netbeans, kodwa kufuneka ukhetho lokukwazi ukuyithumela kwiplate. Ngale nto asizukufuna kuphela iiNetbeans kodwa nomphathi wefayile. Kodwa, ngenxa yoku siya kuyidinga ukuba Ubuntu wayenabo bonke abaqhubi bebhodi yeArduino esiza kuyisebenzisa.
Konke oku kuthatha indawo kunye nexesha uninzi lwabaphuhlisi abangakulungelanga ukuchitha, kungoko ukubaluleka kokusebenzisa i-Arduino IDE hayi ezinye iindlela ezingenazo abaqhubi, okanye ezingezizo i-IDE okanye ezingavumeli ukuhanjiswa kwesoftware. isitya. Into emnandi ngeProjekthi yeArduino, njengakwi-Ubuntu kukuba nabani na angenza iinkqubo, izisombululo okanye izixhobo ezihambelana no-Ubuntu no-Arduino, ngaphandle kokuhlawula nantoni na.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » Uyifaka njani iArduino IDE kwiinguqulelo zamva nje zeBuntu
Kwakhona, enkosi kakhulu !! Inkcazo elungileyo nayo yonke into isebenza ngokumangalisayo.
Ndisandula ukuyifaka kwiLubuntu 18.04 yam kwaye isebenza kakuhle, kusafuneka ndithenge ibhodi yomama. Ndiqala ukuhamba kweli hlabathi leArduino kuba iinkqubo zemfundo zamabanga aphakamileyo eArgentina ziyandibuza, ndingutitshala wezobugcisa.
Uxolo kodwa ukuyifaka kwikhonsoli ekugqibeleni kuye kwanyanzeleka ukuba ndingene kwifolda ndisebenzise umyalelo Sudo apt ukufaka arduino-builder
Andazi ukuba kutheni, kodwa xa ndiphumeze lo myalelo ubundixelele wona uza kundixelela.
chmod: 'install.sh' ayinakufikeleleka: Ifayile okanye isikhombisi asikho
Ndimtsha kwindawo yesoftware yasimahla, ndicinga ukuba ndenze impazamo, kodwa ubuncinci bendikwazi ukuyifaka kwikhonsoli ngokuzilungisa.
Ukuba ungagqabaza ngento eyimpazamo yam okanye kutheni le nto kuphuma eli bali, ndingathanda ukwazi. enkosi kakhulu kwangaphambili kwaye ubambelele kwisoftware yasimahla !!!
I-Redshift: lungelelanisa ubushushu bombala kwiscreen sakho